I-QRF300C Uhlelo Lokuphendula Izithameli
Uhlelo Lwezimpendulo Zezethameli
I-QRF300C iwuhlelo olulula nolungabizi kakhulu lokuphendula izethameli ngezilungiselelo zasekilasini, imihlangano yeqembu, nanoma yikuphi lapho kucelwa impendulo esheshayo. Lawula kalula futhi ubone ngeso lengqondo idatha eqoqiwe ngokungenisa nokuthekelisa amafayela e-Excel futhi uguqule ulwazi lube amaslayidi e-Powerpoint ngenkinobho.
Izinzuzo zohlelo lokuphendula izethameli ze-Qomo ziyashesha. Ngombuzo owodwa, isistimu yokuphendula izethameli ikutshela uma abalaleli banenkinga ngesihloko noma bayasiqonda, futhi ikuvumela ukuthi uguqule isifundo sakho ngokushesha. Akusekho ukuhlala unethemba lokuthi izinhlolovo zizongena ngemva komcimbi - isistimu yokuphendula izethameli ikuvumela ukuthi wenze inhlolovo abahambele umcimbi ngaso leso sikhathi.
I-RF-based Audience Response System 32 RF Student Keypads / USB Receiver
1 I-Instructor Remote / QClick Software Ihambisana Nawo Wonke Amafomethi Wemibuzo
Amakhiphedi Omfundi we-QRF300C QRF
Ifakwe amamodi okuhlanganyela angawodwana kanye naweqembu, isilawuli kude sikusiza ukuthi wenze imibuzo enesikhathi nezivivinyo futhi ubonise imiphumela ngokushesha. Imisebenzi ingalawulwa kalula kusetshenziswa isilawuli kude sokufundisa se-RF esiphinde sisebenze njengesikhombi se-laser. Iza nesibonisi se-LED sesimo samandla nokuqinisekisa impendulo. Ungakhetha ochungechungeni lwemisebenzi efana ne-Freestyle, Imibuzo Ejwayelekile, Isivivinyo Esijwayelekile, Umsebenzi Wasekhaya, Imibuzo Esheshayo, Ivoti/Uphenyo, Imibuzo ye-Ad-lib, Ukuphakamisa Hand, kanye Nokushaya ucingo.
Isoftware ye-ARS ehamba phambili -Qclick Software(Ihlanganiswe ne-PPT)
Nge-QClick software suite, ungakwazi ukumisa amakilasi, udale izivivinyo, udizayine izifanekiso, uphathe ukuxhumana, futhi ukhiqize imibiko. Futhi isekela izici ezijwayelekile ze-Microsoft PowerPoint ezihlanganisa ukuguqulwa kwamaslayidi, ukugqwayiza ngokwezifiso, i-multimedia, umsindo, njll. Amathuluzi asebenziseka kalula akuvumela ukuba uhlele imibuzo, uqhube imibuzo futhi uhlele imidlalo kanye nokungenisa izinhlu zamakilasi ku-Excel futhi ukhiqize imibiko ehambisana ne-Excel. Imodi ye-Freestyle ikuvumela ukuthi uqalise imibuzo nganoma iyiphi indlela yokuhlola oyikhethayo.
Isitholi se-RF esingenantambo
Isamukeli se-RF esilingana nesithupha, esiphathwayo esingenantambo sixhuma kalula kukhompuyutha yakho nge-USB. Ihambisana nawo wonke Windows 7/8/10. Ubuchwepheshe: Irediyo engu-2.4GHz Ifrikhwensi yokuxhumana okubili nokugwema ukuphazamiseka okuzenzakalelayo.
Sekela abantu abangafika kwabangu-500 ngesikhathi esisodwa
I-QRF300C yesistimu yokuphendula izethameli ezijwayelekile
Uzothola i-handbag yamahhala ngohlelo lokukhiqiza ngobuningi.
Lesi sikhwama senza kube lula ukuphatha uhlelo lokuphendula luse noma yikuphi lapho ongathanda ukwenza khona isethulo sakho.
Ukupakisha okujwayelekile: Isethi engu-1/ibhokisi
Usayizi wokupakisha: 450 * 350 * 230mm
Isisindo esiphelele: 4.3kgs
Olandelayo: Ifekthri ye-Qomo Student Keypads eyenziwe e-China
Okwedlule: Izichofozi ezihamba phambili ze-Classroom Response Systems
Uhlelo Lwezimpendulo Zekilasi
I-Interactive Audience Response System
Ukuchofoza kwempendulo yomfundi
Uhlelo Lwezimpendulo Zomfundi
I-QRF300C-isistimu yokuphendula izethameli imininingwane esheshayo
QClick V7.4 Incwadi Yomsebenzisi
QRF300C Qclick Audience impendulo system manual manual